^ မတ်တိုးဝေ၊ လီဆူတိုင်းရင်းသားတို့၏ဘဝဓလေ့ (စာပေဗိမာန်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်၊ ၂၀၀၈)၊ စာ ၅။
^ ယိမ်းနွဲ့ပါးအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ တင်တွင်းသည့် တရုပ်မြန်မာနုယ်စပ်ဒေ သ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ၊ ကချင်ပြည်-ပူတာအိုတောင်တန်းနယ် (၁၉၉ခုနှစ် မှ ၁၉၅၆ ခုနှစ် အတွင်း) စာ ၇၀။[better source needed]
Enriquez, Major C.M., 1921. "The Lisu", Journal of the Burma Research Society 11 (Part 2), pp. 70–74.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisu_people&oldid=1040782365"
This page was last edited on 26 August 2021, at 16:49 (UTC).